China Baby smock ụlọ ọrụ na-emepụta | Senlai
1. Ihe nkpuchi nwa anyị dabara na ọdịdị ahụ nwata ahụ. Uwe ahụ bụ mmiri na-ekpuchi mmiri. Ọ gaghị enwe nsogbu na oge ọkọchị, mana ọ ga-ekpo ọkụ n’oge oyi. Ihe mkpuchi ahụ nwere ike kechie ogwe aka nwa ahụ n'ihu ahụ. Ọ nwere ike igbochi nri na-adaba na ahụ.
2. A na-eji akwa polyester fiber water water, nke a na-eme mmiri. Osikapa akwukwo nri ofe bụ uzuzu uzuzu, apịtị na mmanu mmanu. Ihe niile na-akwụsị ya, n'ihi ya, ụmụaka agaghị agbanwe uwe ha ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, ọ dịkwa ezigbo mma iji kpochapụ ha.
3. Akwa mkpuchi anyị dị n’ụdị n’ụdị, dị iche iche na agba na ụdị dị iche iche. E nwere ọtụtụ ụdị nke anwụrụ anwụrụ ụmụ anyị, nke enwere ike kee ya n'ụdị dị iche iche dịka njirimara dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, dịka ogologo aka uwe, enwere ike kewaa ya n'ụdị ejiji ogologo, ụdị uwe dị mkpirikpi na enweghị ụdị uwe. Styledị uwe ogologo dị mma maka oge oyi, ụdị ejiji dị mkpirikpi na enweghị ụdị uwe dị mma maka oge ọkọchị.
4. Dị ka imewe nke osikapa n'akpa uwe, ọ nwere ike kere n'ime ala osikapa n'akpa uwe, etiti osikapa n'akpa uwe, ọ dịghị osikapa n'akpa uwe na kemeghi osikapa n'akpa uwe. A na-ejikarị imewe akpa osikapa ejide nri gbasasịa mgbe nwatakịrị riri.
5. Dabere na ogologo na ụdị nke smock, enwere ike kewaa ya n'ime obere, ogologo, uwe mwụda, apron Dịka njikọ azụ, enwere ike kewaa ya na ego Velcro, ego ụdọ, mwepu pịa.
Osote: Akpa Ihi ụra
Nwa Ya Anwụrụ
Baby Yi Anwụrụ ọkụ